I-15 eLula kunye neYilayo yokuPeyinta yezandla yezandla | Imisebenzi yezandla ivuliwe
I-15 elula kunye neyilayo yokupeyinta imisebenzi yezandla
Elizabeth Catalan | 05/12/2021 18:00 | Imisebenzi yezandla, Yezandla ngepeyinti
Uyathanda ukupeyinta? Emva koko uya kuthanda ukwenza umzobo wobugcisa. Ziyonwabisa kwaye zisebenza ngeendlela ezininzi. Ngaphandle kwemizobo, ungathatha ithuba lokuphonononga izinto ezintsha ezinokwenzeka kwaye uphuhlise ubuchule bakho kunye nokucinga ngeebrashi ezimbalwa kunye nepeyinti encinci.
Ubugcisa bokupenda bunokusetyenziswa kwiimpahla, izixhobo, imihlobiso kunye nezinto zendlu, amathoyizi, ubugcisa kunye nokunye okuninzi. Jonga ezi zindululo zilandelayo! Uya kubethwa ngumoya ngale mizobo yepeyinti elula nenemibala eyi-15.
1 Ukuhombisa amatye ngepeyinti
2 DIY: Yenza ipeyinti yesitshixo ngepeyinti ye-acrylic
3 Hombisa iibhotile zeglasi ngepeyinti yokuhombisa
4 Hombisa iimagi ngeepeyinti zesiko
5 Umhombiso wembiza ngepeyinti
6 Ityala leselula elihonjiswe ngepeyinti yokutshiza
7 I-DIY: Yenza ijean yakho ngokwezifiso ngepeyinti eyolukiweyo
8 Easy Christmas Landscape Painting
9 Umhombiso ngamagqabi awomileyo apeyintiweyo
10 Iipinecones ezineqhwa zokuhombisa ngeKrisimesi
11 Iingqayi zeediliya zokuhombisa
12 Icactus yelitye
13 I-Pirglassglass enephepha lokuhamba yangasese
14 Umthi weKrisimesi omile okwephayinapile
15 Imigibe enemibala eyenziwe ngamapayina
Ukuhombisa amatye ngepeyinti
Enye yezona zinto zilula kwaye zihlekisayo zokupeyinta ubugcisa onokuthi uzenze uhombise amatye ngepeyinti. Unokuzifakela imibala ukuze ugcwalise iivazi zeglasi kwaye uhombise indlu okanye uchithe ixesha lokuzonwabisa nabantwana abancinci ngenjikalanga ekhaya.
Umzekelo endikuzisa wona ngowesibini, lowo wezinye izilo ezincinci ezintle zokwenza nabantwana, nangona ingcamango ingenayo imida kwaye unokuhombisa amatye njengoko uthanda.
Izinto oza kuzifuna zincinci, amatye agudileyo, ipeyinti ye-acrylic, isiphawuli esisisigxina, kunye namehlo ancangathi. Imiyalelo ayinayo imfihlakalo kodwa kwisithuba Ukuhombisa amatye ngepeyinti ungazifumana.
DIY: Yenza ipeyinti yesitshixo ngepeyinti ye-acrylic
Ngaba kwakha kwenzeka kuwe ukuba ungazifumani izitshixo zakho ebhegini yakho xa uzifuna kakhulu? Ngomsebenzi wezandla olandelayo awusayi kuba naloo ngxaki. Imalunga ne isitshixo esineribhoni ende ehonjiswe ngomzobo i-acrylic.
Ungayenza ngendlela othanda ngayo! Kwisithuba Peyinta isitshixo ngepeyinti ye-acrylic Unomfanekiso weentyatyambo njengomzekelo kodwa kuyo unokupenda nantoni na oyifunayo. Iimathiriyeli oza kuzifuna ukuyenza yiribhoni yesitshixo, iipeyinti ze-acrylic, iibhrashi, ipensile, kunye nephepha.
Hombisa iibhotile zeglasi ngepeyinti yokuhombisa
Ukuba ufuna ukuzama into enzima ngakumbi, enye yezobugcisa bokupeyinta onokuthi uzame ukuyihombisa ngepeyinti eyahlukeneyo Iibhotile zeglasi. Kule nto uya kufuna ngokukhethekileyo iibhotile ezide kunye ezinqamlekileyo, uhlobo lwe-vase, olulungele ngakumbi olu hlobo lwemihlobiso.
Ukongeza kwiibhotile, izinto oza kuzifuna yilaphu lekotoni, ibrashi entle kakhulu, utywala, kunye neepeyinti ezinemibala. Unokwazi ngakumbi malunga nalo msebenzi wobugcisa kwiposi Hombisa iibhotile zeglasi ngepeyinti yokuhombisa.
Hombisa iimagi ngeepeyinti zesiko
Ukuhombisa iikomityi Ngomnye wemisebenzi yobugcisa yokupeyinta onokuyenza. Iphumla kakhulu kwaye iyila kakhulu! Unokwenza ngokwezifiso kwaye uzihombise nokuba ufuna kangakanani. Nokuba yeyakho, isidlo sakusasa ekhaya okanye eofisini, okanye njengesipho komnye umntu. Uqinisekile ukuba uza kulunga kakhulu ngalo msebenzi wobugcisa!
Izinto oza kuzifuna zezi zilandelayo: iikomityi zokuhombisa, ipeyinti enemibala, i-masking tape, isitya kunye nebrashi. Unokufunda ngakumbi malunga nalo msebenzi wobugcisa Hombisa iimagi ngeepeyinti zesiko.
Umhombiso wembiza ngepeyinti
Izityalo yenye yezona zinto zidumileyo zokuhombisa ukuzisa umbala kunye nobomi kumakhaya nakwigadi. Nangona kunjalo, ekuhambeni kwexesha iimbiza zeentyatyambo ziwohloka kwaye zikhangeleka zingabonakali. Ukuyitshiza kwaye uyinike ubomi obutsha, ungayinika idyasi yepeyinti ye-acrylic kwaye uyenze ngokwezifiso ngokuthanda kwakho.
Ukongeza kokuziqhelanisa, yenye yezona zinto zigqwesileyo zokupeyinta onokuthi uzenze. Njengezinto oza kuzifuna: iintyatyambo zeentyatyambo, iipeyinti ze-acrylic, iibrashi kunye ne-varnish esekelwe emanzini. Kwisithuba Umhombiso wembiza ngepeyinti.
Ityala leselula elihonjiswe ngepeyinti yokutshiza
Ukuba uyathanda ukwenza ngokwezifiso izixhobo zakho, ndikuzisela i-DIY eyonwabisa kakhulu kwaye kulula ukuyihombisa iselfowuni yakho. Kuya kufuneka uyile itemplate kunye nemodeli onokuthi ngayo uya kuhombisa isiciko kunye nepeyinti yokutshiza.
Lowo uneposi Ityala leselula elihonjiswe ngepeyinti yokutshiza Luyilo lwejometri kodwa ngentelekelelo encinci kunye nobuchule unokwenza eyona oyithanda kakhulu. Uqinisekile ukuba uyothusa wonke umntu!
Njengezinto eziphathekayo, ukongeza kwi-spray, uya kufuna i-silicone ifowuni yeselula, iqhekeza lekhadibhodi, ipeni, irula, i-cutter kunye neglavu ze-latex.
I-DIY: Yenza ijean yakho ngokwezifiso ngepeyinti eyolukiweyo
Enye yezona zinto zinobuchule bokupeyinta onokuthi uzenze yileyo lungisa iimpahla zakho. Kule meko, ezinye i jeans osele unayo ekhaya kwaye ufuna ukunika ubomi besibini. Ngumsebenzi opholileyo kakhulu kuba uya kukuvumela ukuba wenze iimpahla zakho ngendlela eyonwabisayo nengabizi kakhulu. Ngoko unokukhupha umyili onaye ngaphakathi!
Ziziphi izinto oza kuzifuna ukwenza ijean yakho ibe yeyakho? Abaninzanga. Ipeyinti ye-textile, i-tape measure, iibrashi, i-polymer molds yodongwe kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ibhulukhwe. Kwisithuba I-DIY: Yenza ijean yakho ngokwezifiso ngepeyinti eyolukiweyo ungayibona yonke inkqubo.
Easy Christmas Landscape Painting
IKrisimesi iyeza kwaye i-craft elandelayo ifanelekile ukuhlobisa indlu okanye ukunika isipho kumntu okhethekileyo. Imalunga ne Ipeyinti ye-landscape yekrisimesi elula ukuba ungaphinda uyidale kwiplanga elishinyeneyo.
Ukupeyinta lo msebenzi wobugcisa kuya kufuneka ufumane umthi omileyo, iibrashi, iipeyinti ze-acrylic, kunye nembiza yamanzi. Ukuqala ukwenza lo mzobo kuya kufuneka uhlambulule umthi kwaye upende imithi. Uyakwazi ukubona inyathelo ngenyathelo kwisithuba Easy Christmas Landscape Painting.
Oku kulandelayo yenye yezona zinto zilula zokupeyinta imisebenzi yezandla. Ilungele abantwana ukuba bazonwabise kwaye baphuhlise ubuchule babo. Uya kufuna amagqabi ambalwa owomileyo, ipeyinti ye-acrylic, iibrashi ezithile, kunye nesitya samanzi.
Xa ugqibezela ukwakhiwa kwe amagqabi omileyo Unokusebenzisa ukuhlobisa amagumbi endlu ngokuwabeka kwi-vase okanye unamathele kwiindonga. Kwisithuba Umhombiso ngamagqabi awomileyo apeyintiweyo Unokufunda imiyalelo ukwenza lo msebenzi wobugcisa ubukeke umnandi.
Iipinecones ezineqhwa zokuhombisa ngeKrisimesi
IKrisimesi iyeza kwaye kunye nomnqweno wokuhlobisa indlu okanye itafile yesidlo sakusihlwa seKrisimesi. I iiphayinaphu ezinekhephu Ziyenye yezona zinto ziguquguqukayo kakhulu zokupeyinta onokuthi uzenze ngeeholide. Zilungile njengemihombiso yezinto eziphambili, imihombiso yemithi, iintyatyambo ...
Uzakufuna ntoni? Amaphayinaphu ambalwa, iibhrashi, ipeyinti ye-acrylic, iphephandaba, ibhotile yamanzi, kunye nebrashi. Yenza la maphayinaphu anekhephu angenayo imfihlakalo eninzi kodwa kwisithuba Iicones zepine ezineqhwa zokuhombisa ngeKrisimesi uya kufumana imiyalelo yokupeyinta nge-jiffy.
Iingqayi zeediliya zokuhombisa
Los iingqayi zakudala ukuhombisa iya kuba yenye yemisebenzi yezandla onokuthi uthande kakhulu umphumo wayo. Thatha ithuba leengqayi zeglasi ukuze uzinike ukusetyenziswa okutsha ngentelekelelo encinci kunye nepeyinti. Kwisithuba Iingqayi zeediliya zokuhombisa Uya kufumana uyilo lwevintage kodwa ukuba uyathanda esinye isitayile unokwenza ngokwezifiso zakho njengoko uthanda.
Iingqayi, iziphawuli, iipeyinti, okanye iibrashi zezinye zezinto oza kuzidinga ukuze uziqokelele. Intsalela ungayifumana kwikhonkco kwisithuba.
Le yenye yemisebenzi yepeyinti onokuthi uyenze ukuhombisa into. A imbiza enamatye ezenza a Cactus.
Kungumsebenzi omnandi ukulungelelanisa njengentsapho. Unokuhamba kunye nabancinci ukufumana amatye kwaye uwapeyinte eluhlaza ukuze abukeke njengesiqu se-cactus. Ngumsebenzi wokuzonwabisa opholileyo ngokwenene! Emva koko zifakwe ngaphakathi kwebhodwe lodongwe ukuhlobisa igadi okanye nayiphi na ikona yendlu. Kwisithuba Icactus yelitye Uya kubona isifundo ukuze ufunde indlela yokwenza inyathelo ngenyathelo. Uyilungisile?
I-Pirglassglass enephepha lokuhamba yangasese
Ngepeyinti unokunceda abancinci ukuba benze oku kube mnandi spyglass nge toilet paper roll iibhokisi. Baya kuba mnandi kakhulu ukuyila baze badlale ngayo.
Kwiposi I-Pirglassglass enephepha lokuhamba yangasese Uya kufumana isifundo sevidiyo esicacisayo kunye nenyathelo ngenyathelo ukwenza lo msebenzi wobugcisa. Njengemathiriyeli uya kufuna kuphela iibhokisi ezimbalwa zeeroli zephepha langasese, iglu, iphepha lecrepe kunye nepeyinti enemibala.
Umthi weKrisimesi omile okwephayinapile
Enye yezona zinto zifanelekileyo zokupeyinta ubugcisa beKrisimesi yile Umthi weKrisimesi omile okwephayinapile. Yisayizi egqibeleleyo yokubeka kwishelufa okanye itafile endlwini kwaye uyinike ukuthintela okwahlukileyo kule mihla.
Izinto oza kuzifuna zilula kakhulu kwaye ukuba uyathanda ukupeyinta ubugcisa, ngokuqinisekileyo uya kuba sele unazo ezininzi ekhaya. Uya kuyidinga: iipinecones (ezininzi njengemithi ofuna ukuyenza), ipeyinti ye-acrylic enemibala, iibrashi, isitya samanzi kunye nebrashi. Uyabona ukuba kwenziwa njani kwiposti Umthi wekrismesi omile okwephayinapile.
Imigibe enemibala eyenziwe ngamapayina
Kwakhona kunye neepayinapile kunye nepeyinti unokwenza lo bugcisa obuhle kubantwana abancinci. Imalunga iinkumba ezintle zihlekisa kakhulu, ilungele ukuhlobisa amagumbi abantwana. Nabo banokukunceda ukuba ubenze!
Kwiposi Imigibe enemibala eyenziwe ngamapayina uya kufumana isifundo sevidiyo ukuze ubone ukuba zenziwa njani. Uya kufuna kuphela iipinecones ezincinci ezimbalwa, ipeyinti ye-acrylic enemibala, iibrashi zepeyinti, amehlo eplastiki, isikere, i-silicone eshushu, kunye nepensile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » I-15 elula kunye neyilayo yokupeyinta imisebenzi yezandla
Iindlela ezi-4 zokwenza oonombombiya
Imisebenzi yezandla yokwenza namapayinapile